Oromoo, Dirmadhaa Dirmachiisaa! – Welcome to bilisummaa
Oromoo, Dirmadhaa Dirmachiisaa!
Gara: Ummata Oromoo, Iddoo jirtan maratti,
Ummata Oromoo hundaaf Salaamtaa Obbolummaa isiniif dheheesinee, kan baatii Ramdaanaa
tan Qur,aanni keysatti bu,e nagayaa fii barakaa akka tahu hawwiin qabnu ibsaa, iyyannaa
Oromiyaan humna waraana alagaa jala jiraachuun akkuma jirutti tahee; miidhaan ummata
Oromoo irra gahaa jiru kan ammaa daangaa dabree jira.
Haala hamaa oromyiyaa keysatti Ilmaan oromoo fixuun waraanni agaazii magaalaa calanqootti
ilmoo daaima akka shinbirrotti karaarratti ajjeesuun akasumatti magaalaa Awwadaay keysatti
Ilmaan hegeree oromiyaatiif ijaaf qabnu gareen abbotii garaa kanneen tigreef bitaman nama 8
ajjesan, yaroo hunda taazyaaa taa,uufii booyuun nuufgahe,
Hanga lafarraa nufixan hin eeynuu kaanee gumaa ilmaan keenyatiifii kan abbootii teenyaatiis
kafallee oromiyaa teenyaas lollee haagonfannuu.
Mootummaan saba bicuu wayyaaneetiin durfamtu, handhura Oromiyaa, finfinne fii naannoo isii
ilmaan Tigree irratti galchaa, gara kaaniiniis lafa Oromiyaa qicattee gurguruun ittiin duromaa jirti.
Ilmaan Oromoo ammoo kumaatamaan lafa isaanii irraa buqqifte kadhattuu karaarraa tahuu
mudde. Gara biraatiin, ummatoota ollaa Oromiyaa qubatan, kanneen duriif kabajaa ollumman
nuun waliin bulaa turan, kakaaftee daangaa Oromiyaa kara hundaan tarkaanfatanii lafa
Oromoo fudhachiisaa jirti.
Dhiheenya kana lolli baha Oromiyaa naannoo qubsuma Anniyyaa fii ummatoota Somalee
jiddutti tahaa jiru kanumarraa kan ka’e. Mottummaan Somalee, kan Liyyuu Police ja’amuun
hidhachiiftee, itti bobbaaftee Oromoota lafarra fixaa jirti. Lola bara shan caalaa naannoo
kanaratti deemeen, lubbuu namoota hedduu fii qabeenya qiyaasa hin qabne ummata Oromoo
irraa Soomaleen saamame. Ona Anniyaarraa lafti Oromoo guddoon dhunfaa qubsuma
Soomaalee taasifamte. Kun akkuma dhaadannoo muummichi Wayyaanee kan duraani, Malas
Zinaawii je’e, ja’anii, Oromiyaa fii ummata Oromootuu xiqqeeyssuuf imaammata bahe hujiin
Akkuma beekkamutti, naannoon Anniyyaa tajaajila hawaasumma takkumaatuu argatte hin
beeytu. Jiruu gadadoo keeysa jiraatan. Tana gubbaan, lolaan lafa oomishaaf mijjooftuf firraa
buqqa’uun, beeyladaan duraa saamamuun walitti dabalamee, ummanni Anniyyaa, rakkoo
humtuun waadamaati jira. Yoo hatattamaann Oromoon itti dirmatee dhaqqabamuu baate,
dhumaati rasaasa diinaa daran, ummanni kun beelaa fii dhukkubaan, lafarraa galee, lafa
duwwaa Soomaaleen dhaaluuf deemti.
Qalbiin saree gama lafeeti,”; ja’an maymaaysa Oromootti, ummanni Soomaalee, abjuu
ziyaadZiad Barree irra dhaalan, kan daangaa isaanii hanga Awaash balifatuuti qaban. Hiree
gargaarsa Wayyaaneetti dhimma bahanii fedhinnaa isaanii dhugoomfatuu barbaadu. Haa
hubannu, magaalaan Minoo fageenya KM 100 gaara Dabbaalirraa jirti, duubni dabbaal Awashi
Oromiyaan idduu moggaa hin qabdu. Akkuma, “Finifinnee keenya, Burraayuu keenya, Laga
xaafoo keenya,wkf,” iennee iddoo hundaa dhawwaaqaa jirrutti, Qumbii, magaalaan Minootiis
keenya jennee wareegama barbaachisu baasuun lafa/daangaa Oromiyaa irraa diina facaasuu
qabna. Gootonni keenya warri dur dabran kan akka General Waaqoo Guutuu fii Sooreysa
Jaarra Abbaa Gadaa, gootummaan haqa ofii falmatuu nu barsiisanii dabran. Qeerroon
Oromiyaa ar’aas, faajjii san qabatanii tokkummaan diinaaf gugguufuu diduu nu barsiisaa jiru.
“Hadaamiin Ollaa agamsaa imimaan hin dhabdu,” jedhanii, Anniyya takkaa roorrifamee, gidiraas
fudhatee hin beeku.Ilamaan Anniyyaa guyyaan akkuma abbootti teenysan duriitti, ona keeysan
yeroon itti kabajisiiftan amma. Oromoon, qaamaaniis tahee, qabeenyaan isin waliin jira, lolaa
lolchiisaa dhiirmumma teeysan agarsiisaa.
FIDOn gocha diinummaa ummata keenya lafarraa dhabmsiisuuf godhamaa jiru kana
balaaleyfataa, gargaarsa ummanni keenya barbaadu hunda gumaachuuf qapheedha.
“Leenca darrate jeedalloon dhihana isaa qalbifti,” akkuma janii,wal hirree laafatuu keenyaatu
jabeenya diina keenya tahee jira. Humna qabnu afshaalumman itti dhimma bahuun kan
dandeenyu yoo tokko taane qofa. Abbaa biyya tahuun wareegama qaalii gaafata. FIDOn
qabsoo ummanni Oromoo, Abbaa biyyaa tahuuf godhu qooda irra eeggamu gochuuf qophii
tahuu ibsaa, namuu bakka jiruu, karaa irra jiruun gumaata akka kennu yaamicha goona.
Ibsaa Gammachuu, Hayyu­duree muummicha Hoogganoota FIDO
Previous DRAFT DOCUMENT For PG7 and ODF Coalition